Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့မသုံးခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | NOTICIAS, အတော်ကြာ
ဒါဟာနောက်တဖန်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်သို့မဟုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့လူထုအသိပညာ Cryptoassets ၏ခေါင်းစဉ်အထူးသဖြင့်၏ပြtheနာနှင့်ဆက်စပ်သော Cryptocurrencies၏ပစ်လွှတ်မှုကြောင့် Libra cryptocurrency နှင့် "Calibra ပိုက်ဆံအိတ်" က « Libra အစည်းအရုံး» ယင်းတို့အနက်အကြီးမားဆုံးသောနည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ကမ္ဘာ့အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့ပါဝင်သည် Facebook ကမကြာသေးမီကငါတို့ပို့စ်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း: သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် Libra blockchain-based Facebook cryptocurrency.
ထို့အပြင်စျေးနှုန်းများအသစ်ပြန်ခုန်ထွက် « Bitcoin »ဟုခေါ်သောပထမ ဦး ဆုံးလူသိအများဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြု Cryptocurrency,အဘယ်သူ၏စျေးနှုန်းသည်ယနေ့ (ဇွန်လ -၂၀၉၉) ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ခန့်ရှိပြီးလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ကမ္ဘာ Cryptoassets အပေါ်သတင်းပေါက်ကွဲမှုကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုဆက်စပ်လူသိများရှုထောင့်, အသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်သဘောတရားများကိုစေရန်စေသည် Cryptoassets နှင့် Cryptocurrencies ဤအကတည်းက, သူတို့ရဲ့မွေးစား၏အောင်မြင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံတယ်။
လက်ရှိနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအကျိုးရှိသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် cryptocurrency စီမံကိန်းများကိုဆဲ။ တချို့ကမကြာသေးမီနှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည် ကွန်ဆာဗေးတစ် လက်ရှိကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြသည့်အခြားသူများမှာအဟောင်းနှင့်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်းများဖြစ်သည် အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော သေးငယ်သည့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်စီးပွားဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်ချင်းချိတ်။ အချို့သည်လက်ရှိနှင့်လာမည့်စီမံကိန်းများဖြစ်သည် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် အချို့သောနိုင်ငံများရှိပြည်သူ့ရေးရာအဖွဲ့များနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရမည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်းတို့အားတတ်နိုင်သမျှသိရှိပြီးနားလည်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies အပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဝေါဟာရများနှင့်နည်းပညာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖိတ်ကြားခံရခြင်း၊ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်အမိန့်ပေးခံရသောသူများအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်။
1.3 Distributed Accounting Technology (DLT)
1.4 Blockchain နည်းပညာ
1.6 တိုကင်, Cryptoassets နှင့် cryptocurrencies
1.7 Cryptocurrency ဖလှယ်မှု
၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးdevelopmentရိယာအသစ်ဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းသည် အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုအင်တာနက်ပေါ်မှထုတ်လွှင့်သည် နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ (ICT) ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ရန်။ အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည်အချက်အလက်ကိုသာရည်ညွှန်းသော်လည်းမိုဘိုင်း application နှင့်အင်တာနက်ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်စဉ်သည်
ဒီnewရိယာအသစ် ကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်းများ၏နည်းပညာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အဆတိုးခြင်းများပါဝင်သည် အားလုံးအတွက်ပိုမိုထိရောက်၊ စိတ်ချရသောနှင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သောယန္တရားများရရှိရန် (ပညာရေး၊ အလုပ်၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ဘဏ္financeာရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး) ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးတွင်၊ အင်တာနက်သည်အလုပ်မျိုးဆက်၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒီအရာအားလုံးဟာဒီနေ့လူ့ဘောင်ရဲ့ဗဟုသုတကိုအခြေခံထားတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာများကိုအကြိမ်များစွာရည်ညွှန်းသည် «နည်းပညာဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေး»သို့မဟုတ် FinTech, အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီကနေလာတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ် အတိုကောက် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ၏ "ဘဏ္Technာရေးနည်းပညာများ"။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်နှင့်ကမ်းလှမ်းရန်အတွက် (ဘဏ္,ာရေး၊ စီးပွားဖြစ်၊ နည်းပညာနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ) အဖွဲ့အစည်းများ (ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ)၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ of (ခေတ်မှီနည်းပညာများ) ကိုအထူးရည်ညွှန်းသည်။
ပိုပြီးရှေးရိုးစွဲအခြားသူတွေ, များသောအားဖြင့်သာအဖြစ်စဉ်းစားပါ FinTech မှသာ အသစ်သောနှင့်ခေတ်သစ်အိုင်စီတီကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အတွေးအမြင်အသစ်များနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာမော်ဒယ်များကိုအထောက်အကူပြုသောဘဏ္fieldာရေးနယ်ပယ်မှကုမ္ပဏီများစု။ ဤအယူအဆကိုလွှမ်းခြုံသောနည်းပညာများအနက် Distributed Accounting Technology (DLT) နှင့် Blockchain Technology (Blockchain) နှင့် Crypto-commerce (Cryptoassets နှင့် Cryptocurrencies) တို့ပါဝင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဘဏ္Technာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများမှာရှိသည် ခေတ်မီနည်းပညာကိုအများဆုံးသုံးစွဲသူအရေအတွက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများ (ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ) ကိုကမ်းလှမ်းရန်ရည်မှန်းချက် ဘဏ္accessibleာရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာ၊ စီးပွားရေး၊ အကျိုးရှိရှိ၊ ကြီးမားသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊
အင်္ဂလိပ်စာ DLT တွင်အတိုကောက်သိထားသော Distributed Ledger Technology သည် "Distributed Ledger Technology" ၎င်းကိုများသောအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်တွင်အသုံးပြုသော်လည်း၊ အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအများပြည်သူဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ်တွင်တည်ရှိသော Blockchain Technology ပါ ၀ င်သည်။ DLT သည်နည်းပညာကိုပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြင့်သာရည်ညွှန်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကြားခံမရှိဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြားခံမရှိဘဲဖြန့်ဖြူးထားသောဒေတာဘေ့စ်များမှတဆင့်အချက်အလက်များ၏မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှင့် cryptographic ကာကွယ်မှုကိုအာမခံသောနည်းပညာကိုဆိုလိုသည်။
DLT အကြောင်းပြောဆိုခြင်းတွင်ဖြန့်ဝေထားသောနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော node ကွန်ယက်၏သဘောတရားများပါဝင်သည်, အရာသည်အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုထားသောဒေတာဘေ့စ်မိတ္တူတစ်စုံကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်အိမ်ရှင်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ 51% တိုက်ခိုက်မှု, ထက်ပိုဘာမျှမဖြစ်သည့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူတစ် ဦး သည်ကွန်ယက်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူသည် node အများစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု။ ထို့ကြောင့်ကွန်ယက်တွင်အုပ်ချုပ်မှုနိယာမကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပါ ၀ င်သူများအကြားမျှတမှုရှိစေရန်ကြိုးပမ်းနေသည် (သို့) ၎င်းတို့အကြားလှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်ခြယ်လှယ်ခြင်းများမရှိပါ။
Blockchain ၏အယူအဆကို DLT နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ သဘောတရားနှစ်ခုစလုံးကိုနားလည်ရန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပြောနိုင်သည်။ ငွေကြေးအကြောင်းပြောရလျှင် DLT သည်“ Currency” ၏အယူအဆဖြစ်လိမ့်မည်။ Blockchain သည်အထူးသဖြင့်ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ယူရို၊ ရူဘယ်၊ ဤတစ်ခုချင်းစီသည်ငွေကြေးများစွာအနက်တစ်ခုကဲ့သို့ပင် Blockchain သည် DLT ဖြစ်သည်။ DLT သည်ယေဘူယျဝေါဟာရဖြစ်ပြီး Blockchain သည်တိကျသောဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအထူးသဖြင့် cryptocurrencies တွင်လူကြိုက်များမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Blockchain အကြောင်းပြောသောအခါတ ဦး တည်းသောအားဖြင့် Bitcoin ၏မူလပလက်ဖောင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးပထမ ဦး ဆုံးဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Blockchain နည်းပညာBlockchain ဟုလည်းလူသိများသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၎င်း၏အမည်ဖြင့်ဖော်ပြသည် ကွန်ယက်အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သော၎င်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသူများက၎င်း၏ဖန်တီးမှုမှအဆုံးအထိစစ်ဆေးရမည်။ ပြီးတော့ block တစ်ခုစီမှာ၎င်းရဲ့ predecessor block ကို hash pointer ပါမယ်။ Blockchain သည်များသောအားဖြင့်တူညီသောနာမည်ရှိသည့် block explorer ကိုပြုလုပ်သောပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း၏အမည်နှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။
Blockchain တွင်, hash သည်မည်သည့်အရွယ်အစားရှိမဆိုအခြား data များ၏သေးငယ်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျပန်းဂဏန်းများကိုသာသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းနည်းပညာသည်လိမ်လည်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အသုံးပြုသည်။ block တစ်ခုချင်းစီတွင်သီးခြား hash သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်၎င်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသော data နှင့်ယခင် block ၏ hash တို့ဖြစ်သည်။ Hashs သည် block တစ်ခု၏ content များပြောင်းလဲသွားပါကထို block ၏ hash ပြောင်းနိုင်သည့်နည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အကြောင်းအရာပြောင်းလဲမှု၏ထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘဲ hash ကိုပြောင်းလဲပါက၎င်းသည်နောက်ပိတ်ဆို့မှုအားလုံးတွင်ပြတ်တောက်သွားသည်။
asi Blockchain သည်သဘာဝကျကျ encrypt လုပ်ထားသော system တွင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောနည်းပညာများကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်အင်တာနက်မှတဆင့်အသုံးပြုသူများ၊ သူတို့၏အထောက်အထားများ၊ ဒေတာနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်ကြားခံများမလိုအပ်ဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ ပြုသောအမှုအားလုံးသည်ခိုင်လုံသော၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရည်အသွေးများရှိသည်။
Digital Mining သည်များသောအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းသည့်လုပ်ရပ် (နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များ) ကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိမှုအတွက်ဆုရရှိရန်အတည်ပြုသည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည် host (node) သည် Blockchain အတွင်းတွင် cryptographic လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များအဖြစ်တိုကင်များ၊ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ် cryptocurrencies ကိုဖန်တီးသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည်များသောအားဖြင့် algorithms များနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သောအလွန်တိကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်သွားသည်။
ထိုလုပ်ရပ်တွင်အခြေခံအားဖြင့် node တစ်ခုသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည်, ထို့နောက်သူက၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ hash နှင့်အတူ block သို့ထုပ်ပိုး, ထို့နောက်ယခင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ hash ကို select လုပ်ပါနှင့်လက်ရှိတစ်ခုထည့်ပါ။ ထိုအခါဇာတိ Blockchain သဘောတူညီမှု algorithm ကို run node တစ်ခုသည်သတ်မှတ်ထားသော block ကိုဖြည့်ရန်နှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုကိုရရှိရန်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရန်သေချာစေရန်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း၌, “ Consensus Algorithms” သည် Blockchain ၏မည်သည့်မိတ္တူသည်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အရာသည်မဟုတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထက်ပိုသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည် -“ အမြဲတမ်းပိုမိုမှန်ကန်မှုရှိရန်အမြဲတမ်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည့်အရှည်ဆုံးကွင်းဆက်သည်အများဆုံးသောလုပ်ကွက်များရှိသည့် Blockchain ၏” နှင့်“ ထောက်ခံမှုအများဆုံးရှိသောလုပ်ကွက်များ၏ကွင်းဆက်များသည်တရားဝင်အဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်။ ” များစွာရှိပါသည် « Consensus Algorithms » လက်ရှိတွင်ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့မှုကိုတိုင်းတာရန်၊ အလုပ်၏သက်သေအထောက်အထား / ပါဝါနှင့်လောင်းကြေး / POS ၏သက်သေပြ။
အပြင်« Consensus Algorithms »မှလူသိများသော«မက်ဆေ့ခ်ျကိုကျပန်းဖတ်လို့မရတဲ့စီးရီးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ encryption or Encryption Algorithms »။ Blockchain တစ်ခုအတွင်း၌ဤအရာသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့မှာ CryptoNote၊ CryptoNight, Equihash, Scrypt, SHA နှင့် X11 တို့ဖြစ်သည်။
တိုကင်, Cryptoassets နှင့် cryptocurrencies
Blockchain အတွင်းမှာ၊ တိုကင်များကိုများသောအားဖြင့်၎င်းမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်သည့်တန်ဖိုးယူနစ်ကိုကိုယ်စားပြုသော cryptographic token အဖြစ်သတ်မှတ်သည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရရှိရန်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်။ များစွာသောအရာများထဲတွင်တိုကင်တစ်ခုသည်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးအပ်ရန်၊ လုပ်ဆောင်သောသို့မဟုတ်လုပ်ကြံခံရသည့်အလုပ်အတွက်ပေးဆပ်ရန်၊ ဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတိုးတက်စေရန်မက်လုံးပေးခြင်းသို့မဟုတ်တံခါးပေါက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နေ Cryptoactive ကိုများသောအားဖြင့် blockchain platform အတွင်းထုတ်ပြီးရောင်းဝယ်သောအထူးလက္ခဏာသက်သေအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်မတူကွဲပြားသောတည်ဆဲတိုကင်များ (cryptocurrencies၊ စမတ်စာချုပ်များ၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်များအစရှိသဖြင့်) နှင့်အလုပ်လုပ်ရန် cryptography ကိုသုံးသောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုရည်ညွှန်းသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Cryptocurrency သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဟုလူသိများသည့်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သော Cryptoasset အမျိုးအစားများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဒွိပုံစံဖြင့်တည်ရှိပြီး၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအသုံးပြုခွင့်နှင့်ပါတ်သက်သောအရာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဆိုပါက၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့သောဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်၍ မရပါ။ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဒီဂျစ်တယ်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ် multimedia ဖိုင် (စာသား၊ အသံ၊ ဗွီဒီယို၊ ပုံ) ကိုလည်ပတ်နေသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ကိရိယာတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
Cryptocurrencies တစ်ခုချိန်း (လဲလှယ်) လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်သယ်ဆောင်သောသူတို့အားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရည်ညွှန်းသည် cryptocurrencies ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများဖြစ်သည့်အစုရှယ်ယာ ၀ င်များမှလက်ခံသောရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ဘဏ္securitiesာရေးအာမခံများကဲ့သို့လည်ပတ်ခွင့်ပြုသည်။
တစ် ဦး ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် ရိုးရာသို့မဟုတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း (DEX), သင့်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည် အသုံးပြုသူများ (ကုန်သည်များ) ၎င်းတို့သည်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ (အခမဲ့တန်ဖိုးများ) ပေါ် အခြေခံ၍ အမြတ်အစွန်းရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲထားသော crypto ဈေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပလက်ဖောင်း၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ KYC (သင့်ဖောက်သည်ကိုသိပါ) y AML (ငွေကြေးခဝါချမှု)။ ထိုသူတို့ကများသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ခံနှင့် မြဲမြံစေလော့ မြို့တော်ကန့်သတ် ယင်း၏ပလက်ဖောင်းတွင်ပါဝင်ရန်။
နောက်ဆုံး၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဖလှယ်မှု (DEX) မတူတာက ရိုးရာဖလှယ်မှု၎င်းတို့သည်အလွန်တူညီသောနည်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်၊ သို့သော်ယခင်များသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အဲဒီထဲမှာသူတို့ကိုပြောဆိုလိုသည် အဘယ်သူမျှမကြားခံရှိပါတယ် နှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကြောင့်ပလက်ဖောင်း Self- ရပ်တည်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ပြောကြသည် မြင့်မားသော privacy နှင့်အမည်မသိပင်အဆင့်ဆင့်.
သင်ယူစရာများစွာရှိပါသည်၊ အထူးသဖြင့် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာများနှင့် Blockchain အကြောင်းအသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်၊ ဒီနေရာမှာထိတွေ့မှုကအသစ်အဆန်းဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့သူတိုင်းကစူးစမ်းလေ့လာဖို့စတင်လေ့လာသင့်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကိုဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စေတယ်။ ဒီအီလက်ထရောနစ်နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပုံစံအသစ်ကဆိုလိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့သင်ယူသင့်တယ်။ နိုင်ငံအားလုံးမှငွေသားများနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူများမှာရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနီကဲ့သို့သောကုန်စည်ငွေနှင့်ပင်စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ နှင့်အချို့သောရှိပြီးသားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကို virtual ပိုက်ဆံအစားထိုးလိုက်ပါ။
သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်အတွင်းရှိအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါ၊ အောက်ပါဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် - «Crypto-မင်းမဲ့စရိုက်: အခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေး၊ အနာဂတ်လား။»ပြီးတော့«လက်တင်အမေရိကနှင့်စပိန် - Cryptocurrencies ရှိသော Blockchain စီမံကိန်းများ"။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပုံရသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးနားလည်ရလွယ်ကူသောစကားဖြင့်ဖော်ပြသောကြောင့်၊ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် cryptocurrencies ၏ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတမရှိသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဤအသိပညာရှာဖွေမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်ဟုယူဆသည်။ ဤ virtual ငွေကြေးများ၏လက်ရှိတိုးတက်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ရမည်၊ မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္transactionsာရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Luis josé Larez ကိုပြန်ပြောပါ
လူးဝစ်၊ သင့်ရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်အများပြည်သူအားလုံးအတွက်အထူးသဖြင့်ဤကမ္ဘာနှင့် ပတ်သက်၍ စတင်သိကျွမ်းသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
Otto Gutman ဟုသူကပြောသည်
Otto Gutman အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ, Hernán။ သင်၏မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စာဖတ်ခြင်းသည်သင့်အားလက်ရှိဗဟုသုတ၏အရေးကြီးသောareaရိယာ၏ဗဟုသုတကိုမှန်ကန်သောခြေထောက်ပေါ်၌စတင်နိုင်ရန်များစွာအထောက်အကူပြုမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဝိုင် ၄.၁၁ ပျက်နေပြီ